Sharciga: Sexting in Scotland | Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Sharciga Sexting hoosta sharciga ee Scotland
"Sexting" ma aha erey sharci ah. Sexting waa “is-soo saaray wax galmo cad oo muuqaal ah”Oo inta badan lagu qaado taleefannada casriga ah. Waqtigan xaadirka ah, dabeecadaha "galmada" noocyada kala duwan ee Scotland waxaa lagu xukumi karaa mid ka mid ah qaynuunno badan waana arrin adag. Qaybaha qaanuunka ee kor ku xusan waa kuwa ugu muhiimsan ee ay u adeegsan doonaan xeer ilaaliyeyaashu. Wax kastoo aan ugu yeerno, 'galmada' waa wax caadi u ah carruurta iyo dadka waaweynba. Sababtoo ah ilmuhu oggol yahay sameynta ama dirista sawir, sharci kama dhigeyso. Dembiyada ay ku kacdo internetka ayaa ka mid ah qaybaha dambiyada ugu koritaanka degdegga badan maanta.
Ciqaabta cayrisku waa galitaanka habdhaqan iyadoo ujeedku yahay cabsi iyo gariir. Dhammaan ama qayb ka mid ah habkaas dhaqanku wuxuu noqon karaa taleefanka gacanta ama isticmaalka bogagga warbaahinta bulshada iyo wax lagu daabaco qofkaas. Waa ku sii badanayaan carruurta. Kani maahan in loola jeedo shaqsi ahaan.
Maamulaheena guud, Mary Sharpe, waa xubin ka mid ah kuliyada u doodayaasha iyo kuliyada cadaalada. Waxay khibrad u leedahay sharciga dambiyada labada dacwad oogid iyo difaac. Mary Sharpe waxay hada kujirtaa liistada aan ku shaqeynin inta ay ku lug leedahay sadaqada. Waxay ku faraxsan tahay inay kala hadasho waalidiinta, iskuulada iyo ururada kale guud ahaan wax ku saabsan saameynta wax ku oolka ah ee burushka leh sharciga ku saabsan xadgudubka galmada ee la xiriira galmada. Ma awoodi doonto inay ku siiso talo sharci kiisaska gaarka ah.
Sharciga dembiyada ee Scotland waa ka duwan yahay sharciga England iyo Wales iyo Waqooyiga Irland. Eeg tan article ku saabsan xaaladda halkaas oo ay la socdaan our Page dusheeda Saraakiisha sharciga waxay ula dhaqmaan cabashooyinka waxa aqoonyahanada iyo saxafiyiinta ugu yeeraan "galmada" sida dambi kasta oo kale oo dhici kara. Waxay ku sameeyaan shaqsi shaqsiyeed. Carruurta ka yar 16 jir guud ahaan waxaa loo gudbin doonaa Nidaamka Maqalka Carruurta. Dhacdooyinka dembiyada culus sida kufsiga, carruurta kayar da'da 16 sano waxaa lagula tacaali karaa iyadoo loo marayo nidaamka cadaaladda dembiyada ee maxkamadda Sare ee Garsoorka.
Haddii lagu xukumo dembi galmo, xukunnada kaladuwan ayaa aad u ballaaran. Waxay ku dari doonaan ogeysiiska diiwaangelinta Dembiilayaasha Galmoodka ee sannadihii 16 sano iyo ka badan ee laga baaraandegay iyadoo loo marayo maxkamadaha dembiyada.
Carruurta ka yar 16 sano, dembiga galmada waxaa loola dhaqmi doonaa sidii "xukun" ujeeddooyinka dhaqan celinta dhaqan celinta dambiilayaasha 1974 in kastoo aan loogu yeerin nidaamka maqalka caruurta. Hooska cusub Bixinta (Iskotland) Sharciga 2020, dhalinyarada guud ahaan looma baahna inay soo bandhigaan dembiyada noocaas ah markay raadinayaan shaqo ilaa ay rabaan inay la shaqeeyaan kooxaha nugul ee ay ku jiraan carruurta. Xaaladaas oo ah dembiyada galmada waxaa lagu sheegi karaa shahaadada shaacinta. Waalidiintu waa inay raadsadaan talo sharci oo ku saabsan qodobadan cusub.
Saameynta wax ku oolka ah ee dembiga galmada uu ku leeyahay shaqada, nolosha bulshada iyo safarka qof ka yar, kana weyn 16, waa mid muhiim ah oo aan aad loo fahmin Halkan waa a kiiska laga bilaabo 2021 markii la diiday rafcaankii uu qaatay wiil dhalinyaro ah oo bartay cilmiga sharciga ee Edinburgh oo ahaa in magaciisa laga saaro liiska carruurta ee ku saabsan dembiyada galmada markii uu yaraa.
Laga soo bilaabo warbixinta kiiska: “Dabagalka waxaa lagu xukumay seddex dambi oo hoos imanaya Dembiyada Galmada (Scotland) 2009 Bishii Oktoobar 2018. Dembiyada ayaa si ballaadhan ula mid ahaa si faahfaahsan, oo ku lug lahaa dabagalka oo gacmihiisa saaraya naasaha, lugaha, iyo cawrada kuwa dacwooda dharkooda, waxaana lagu galay saddex gabdhood oo dhalinyaro ah oo cabanaya. Xilliga dambiyada, dacwoodayaashu waxay da'doodu u dhexeysay 13 ilaa 16 iyo dabagalka wuxuu da 'u dhaxeysay 14 iyo 16. Dembiyada ayaa ka dhacay goobaha dadweynaha waxaana lagu tilmaamay inay ku lug leeyihiin xubno ka mid ah "awoodda, xakamaynta, iyo dhaqanka wax is dabamarinta" “
In kasta oo kiiskani aanu ku lug lahayn dembiga galmada, isla welwelka ku saabsan awoodda, xakamaynta iyo wax is daba marinta ayaa lagu dabaqi karaa kiisaska galmada qasabka ah sidoo kale.
Guud ahaan, xukunnada carruurnimada, oo ay ku jiraan arrimaha laga qabtay Nidaamka maqalka ee Carruurta, si toos ah toos looguma shaacin doono shaqo-bixiyeyaasha mustaqbalka waxayna xaq u yeelan doonaan dib-u-eegis madax-bannaan iyada oo loo marayo Maxkamadda Sheriff. Nidaamkan dambe waxay u badan tahay inuu noqdo kharashka qofka dhallinyarada ah.
Iyada oo internetka iyo hanjabaadda galmada ay sii badato, mas'uuliyiinta xeer-ilaaliyeyaasha waxay qaadanayaan qaab wax ku ool ah. Macallimiinta, waalidiinta iyo carruurtu waxay u baahan yihiin inay naftooda u sheegaan halista jirta. Pals ee wadaaga sawirrada aan sharciga lahayn ee ay ka heleen kuwa kale waa la ciqaabi karaa.
Hay'adda Reward Foundation waxay u diyaarisay qorshooyinka casharrada ee ku saabsan sharciga aagga. Haddii aad xiiseyneyso, fadlan la xiriir agaasimaha guud mary@rewardfoundation.org wixii macluumaad dheeraad ah.
<< Galmada Galmada galmada sida sharciga England, Wales & NI >>